म कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु : नेता गौतम (अन्तर्वाता) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more म कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु : नेता गौतम (अन्तर्वाता)
मंसिर २१ गते, २०७६ - १५:२७
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ । आफ्ना कतिपय विचार र अडानका कारण उहाँको जीवनमा राजनीतिक उकालीओराली सामान्य साबित भइसकेका छन् । पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । सरकार वा पार्टीको काममा सधैँ शक्तिशाली भूमिकामा देखिने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमसँग राससका लागि प्रकाश सिलवाल, रमेश लम्साल र शरद शर्माले गरेको संवादको सम्पादित अंश:
– यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ । जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन् । कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन् । मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन् । त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन । आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौँ रु यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ ।
तपाइलाइ राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने पनि पछिल्लो समय सुनिएको छ, खास कुरा के हो ?
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीचको हैसियतमा असमानता छ भन्ने बुझाइ हो तपाईं को ?
–के फरक प¥यो त । वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न ? मैले खोजेकै हो । म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो । २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई । विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ । अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाईंनै हो, तपाईं नै लाग्नुस् । उहाँहरुले नै भनेको हो । चुनावमा गइयो, हारियो ।
तपाईं लाई धोका भयो उसो भए… ?
–मेरो लाग्यो, पुग्यो भने वा केही गरी म फेरि निर्वाचनमा गएर जितेर म प्रधानमन्त्री भएर आए भने सबभन्दा पहिले मैले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गराउँछु । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको त्यो भिन्नता किन रु एउटा माथिल्लो र अर्को तल्लो गरी जुन व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधनबाट समाप्त गर्नेछु । राष्ट्रियसभाबाट उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । राष्ट्रियसभाले निर्णय ग¥यो तर तलकोले उल्टाइदिन्छ । तलको निर्णय ग¥यो माथिल्लोले उल्टाइदिन्छ । यस्तो हुनु हुन्न ।
तपाईं अखिल नेपाल किसान महासङ्घको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । लामो समय किसान आन्दोलनमा लाग्नुभयो । तपाईं ले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना सुनाउँदै आउनुभएको छ, तर लागू भएको देखिँदैन त ?
– सरकारले बनाउने कृषि कार्यक्रममा हाम्रो किसान महासङ्घलाई कहिल्यै नै आमन्त्रण गरिएन । हाम्रा विचार कहिल्यै नै सुनिएन । सुझाव पनि मागिएन । यसपटक पनि मागिएन । पहिलो पटक किसान महासङ्घ जन्माउँदा खेरी जमीन जमिनदारीसँग थियो । त्यो खोसेर किसानलाई बाँड्ने काम भयो । दोस्रो पटक वितरण गरिएको जमीनलाई व्यावसायिकीकरण चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्छ भनियो । यसपटक अब सम्पूर्ण कृषिभूमिमाथि राज्यको स्वामित्व हुुनुपर्छ । यो किसानको माग हो । कसरी हुन्छ त, भन्दा राज्यले सबै कृषि भूमि किन्नुपर्छ । जबसम्म तपाईंले कृषिभूमि राज्यको मातहतमा ल्याउनुहुन्न तबसम्म आत्मनिर्भर हुने कुरा हुनै सक्दैन किनभने अहिले हाम्रो देशमा ३१ लाख हेक्टर मात्र कृषिभूमि छ । यसका टुक्रा टुक्रा गरेर तीन करोड टुक्रा छ । टुक्रा जग्गामा खेती हुन्छ रु त्यहाँ त कोदालो चलाउँछुभन्दा नि पुग्दैन । हातले खोस्रेर खेती गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
मंसिर २१ गते, २०७६ - १५:२७ मा प्रकाशित